January 12, 2021 - Hargeele - Wararka Somali State
Cayaaraha January 12, 2021
(Burnley) 12 Jan 2021. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa la wareegtay hoggaanka horyaalka Premier League, kaddib markii ay garoonka Turf Moor ku soo garaaceen Burnley. Man United ayaa qeybta hore awoodi weysay in la kala nasto iyadoo goolal ku hoggaaminaysa ciyaarta, maadaama ay doonaysay inay hoggaanka u qabato horyaalka caawa. Luke Shaw ayaa nasiib ku […]Sii akhriso
(Burnley) 12 Jan 2021. Waxaa la shaaciyey safafka rasmiga ah ee ay garoonka ku soo geli doonaan kooxaha Burnley iyo Manchester United ciyaar qeyb ka ah horyaalka Premier League. Red Devils haddii ay caawa ka fogaato guuldarro ka soo gaartay naadiga ay martida u tahay ee Burnley, waxa ay ka sare mari doontaa Kooxda Liverpool […]Sii akhriso
Madaxweyne ku-xiggeenka Galmudug oo Kormeeray xarunta loo diyaariyey guddiyada doorashooyinka “Sawirro”
Soomaaliya January 12, 2021
Muqdisho (SONNA)-Ku-simaha madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug ahna madaxwayne ku-xiggeenka Mudane Cali Daahir Ciid ayaa kormeeray xarunta loo diyaariyay inay dagaan Guddiga doorashooyinka. Xaruntani ayaa ah mid loo diyaariyay inay degaan guddiyada doorashooyinka heer Qaran iyo dawlad gobaleed iyo sidoo kale guud ahaan hawl wadeenada doorashada. Madaxwayne ku-xiggeenka Sii akhriso
(London) 12 Jan 2021. Tababare Jose Mourinho ayaa u jawaab celiyey Mesut Ozil kaddib markii uu ka soo yeeray war ku saabsan Kooxda Tottenham. Xiddiga khadka dhexe ee Arsenal ayaa haatan dibad-joog ka ah Gunners, laakiin waxa uu muujiyey sida uu daacadda ugu yahay kooxda ka dhisan Waqooyiga Magaalada London. Ozil ayaa mar la la […]Sii akhriso
(Manchester) 12 Jan 2021. Sergio Aguero ayaa seegi doona kulanka horyaalka Premier League ee kooxdiisa Manchester City ay la ciyaari doonto Brighton habeen dambe, sida uu xaqiijiyey tababarihiisa Pep Guardiola. Weeraryahanka reer Argentina ayaa seegay kulankii Axaddii wareegga saddexaad ee FA Cup-ka oo ay guusha ka gaareen Birmingham, maadaama uu ku jiro xaalad karaantiil Sii akhriso
Ethiopia: Understanding Oromia’s mayhem after Hachalu’s murder – The Africa Report
Ethiopia News January 12, 2021
Ethiopia: Understanding Oromia’s mayhem after Hachalu’s murder The Africa ReportSii akhriso
Ciidanka xoogga dalka oo dilay horjooge sare oo ka tirsan Al-shabaab
Muqdisho (SONNA)-Ciidanka xoogga dalka oo maanta howlgal ka sameeyay tuulooyin hoos yimaadda degmada Baardheere, ayaa bur buriyay saldhigyo argagaxisada Alshabaab ku lahaayeen halkaas, sida ay sheegeen saraakiisha ciidanka. Howlgalka waxaa lagu dilay mid kamid ah hor joogiyaasha sare sare oo ka tirsan Alshabaab kaas oo ciidanka soo bandhigeen meydkiisa. Gaashaanle dhexe, Sii akhriso
Wasiirka Gaashaandhigga XFS oo la kulmay Saraakiil ka tirsan Ciidamada Mareykanka
Wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji oo uu welhiyo taliye ku xigeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Jeneraal Cabaas Amiin ayaa waxay kulan la qaateen saraakiil ka tirsan hogaanka taliska ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya. Dhinacyadaasi waxay ka wada hadleen sidii dowladda Mareykanka ay u xoojin leheed Sii akhriso
Somali PM reserves 30% of parliament seats for women in upcoming poll – Arab News
Somali News January 12, 2021
Somali PM reserves 30% of parliament seats for women in upcoming poll Arab NewsSii akhriso
Wasiirka Warfaafinta Xukuumadda Federaalka Soomaaliya mudane Cismaan Abuukar Dubbe ayaa maanta kulan la qaatay safiirka dowladda Shiinaha u fadhiya Soomaaliya,iyagoo ka wada hadlay arrimo ay kamid yihiin xoojinta xiriirka labada dal. Kulanka wasiirka Warfaafinta uu la qaatay Danjire Qin Jian waxaa ku wehliyay agaasimaha Wakaaladda Wararka Qaranka ee (SONNA) Cali C/qaadir Sii akhriso